Arch Linux Inoraira Vese Vashandisi Vako Vanofanira Kuziva | Kubva kuLinux
Mirairo yeArch Linux iyo yako ese vashandisi vanofanirwa kuziva
Luigys toro | | GNU / Linux, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Kunyangwe ini ndichiwanzoshandisa koni iyi, ndinoreurura kuti handina kugona kubata nemusoro mirairo, ini ndinowanzo shandisa "cheat sheet" kwandakanyora pasi mirairo dzakasiyana dzandinowanzoda uye kuti mune dzimwe nguva handirangariri. Iyi pamwe haisi iyo nzira yakanakisa yekuve nemirairo yatinoda padyo, asi ndiyo yandinoshandisa uye inoshanda kwandiri.
Iye zvino zvandiri kunakidzwa neManjaro KDE (Chii chinonzi Arch Linux-based distro), Ndakaona zvichinakidza kugadzira muunganidzwa wemirairo iyo inonyanya kushandiswa muArch Linux uye mamwe asina kushandiswa zvakanyanya asi ane zvinonakidza zvinoshandiswa.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti nzira yakanakisa yekuziva mirairo yeArch Linux ndeye Wiki yedistro pachayo, uko kune zvakakwana uye zvakakwana ruzivo rwemirairo yega yega. Iko kuumbwa hakusi chinhu kunze kwekukurumidza revhisheni gwara, kuongorora mumutemo wega wega (mashandisiro, utility, syntax, pakati pevamwe) tinokurudzira zvakasimba kuenda Arch Linux Wiki.
1 Pacman uye Yaourt: iwo maviri akakosha mirairo yeArch Linux
2 Basic Command Inoshandiswa muArch Linux
Pacman uye Yaourt: iwo maviri akakosha mirairo yeArch Linux
Pacman y Yaourt gadzira Arch Linux imwe yeakanakisa distros aripo nhasi, kuburikidza navo isu tinogona kunakidzwa zviuru zvemapakeji uye zvirongwa zviripo kuti zviiswe nemirairo iyi. Nenzira imwecheteyo, maturusi ese ari maviri anoshanda nenzira yakafanana chaizvo saka kudzidza kuishandisa kuri nyore kwazvo.
Pacman ndiye Arch Linux's default package maneja, zvakadaro Yaourt chiputira chinotipa mukana weAUR munharaunda yekuchengetera, kwatinogona kuwana imwe yeakakura akaunganidzwa mapakeji katarogu aripo nhasi.
Iwo wekutanga Pacman neYaourt mirairo yatinofanira kuziva ndeinotevera, isu tichazvimisikidza nezvavanoita, iwe unogona kuona kufanana kwemirairo, nenzira imwecheteyo, simbisa kuti pacman inoitwa nesudo uye kune yaourt hazvidiwe.
sudo pacman -Syu // Gadziridza iyo system yaourt -Syu // Gadziridza iyo system yaourt -Syua // Gadziridza iyo sisitimu mukuwedzera kune eAUR mapakeji mapakeji kubva kudhatabhesi Sudo pacman -Syy // Simba kuenzanisira kwemapakeji kubva kudura reyourt -Syy // Kumanikidza kuwiriranisa kwemapakeji kubva kudhatabhesi sudo pacman -Ss package // Inokutendera kuti utsvage pasuru mune yeakachengetedzwa yaourt -Ss package // Lets kutsvaga pakiti mumabhuku ekuchengetedza sudo pacman -Hungu package // Tora ruzivo nezve pasuru iri mune yekuchengetera yaourt -Hungu package // Tora ruzivo kubva pasuru iri mune zvinyorwa zvinyorwa pacudo pacman -Qi package // Ratidza ruzivo rweyakaiswa package yeourt -Qi package // Ratidza ruzivo rwepakeji yakaiswa sudo pacman -S package // Kuisa uye / kana kugadzirisa pasuru yaourt -S package // Kuisa uye / kana kugadzirisa pasuru sudo pacman -R package // Bvisa pasuru yaourt -R package // Bvisa pasuru sudo pacman -U / nzira / kuenda / iyo / package // Isa wepakeji pasuru yaourt -U / nzira / kuenda / iyo / package // Isa pasuru yemuno sudo pacman -Scc // Bvisa cache package yaourt -Scc // Bvisa package cache sudo pacman -Rc package // Bvisa pasuru uye zvinoenderana neyourt -Rc package // Bvisa pasuru uye kutsamira kwayo Sudo pacman -Rnsc package // Bvisa pasuru, kutsamira kwayo uye marongero ayourt -Rnsc package // Bvisa pasuru, kutsamira kwayo uye marongero sudo pacman -Qdt // Ratidza nherera mapakeji yaourt -Qdt // Ratidza nherera mapakeji
Basic Command Inoshandiswa muArch Linux
Kare kare zvakaburitswa muno mu KubvaLinux mufananidzo watinogona kuvaka nayo cube, iyo yakatibvumidza kuve neArch Linux mirairo iripedyo, uyu mufananidzo unosanganisa iyo yakasara yemirairo yataida kugovana newe.
Iwe unogona kuwedzera iyi mirairo nehungwaru hwakaitwa munguva yakapfuura, ne Inopfuura mazana mana emirairo yeGNU / Linux yaunofanirwa kuziva 😀
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Mirairo yeArch Linux iyo yako ese vashandisi vanofanirwa kuziva
Kugona chose. Iyo inondishandira ini chaizvo kune iyo Arch yandinayo pane yangu netbook uye iyo partition yandinayo neParabola GNU / Linux-libre pane desktop yangu PC.
zvese izvo info zviri pane archlinux wikipedia. : /
Pindura kune chando
Ini ndinotora mazwi zvandakanyora muchinyorwa:
«Zvakakosha kuziva kuti nzira yakanakisa yekuziva mirairo yeArch Linux ndiyo distro Wiki pachayo, uko kune zvakakwana uye zvakakwana ruzivo rwemirairo yega yega. Iko kuunganidzwa hakuna chimwe kunze kwekukurumidza kunongedzera gwara, kuongorora mumutemo wega wega (mashandisiro, utility, syntax, pakati pevamwe) tinokurudzira zvikuru kuenda kuArch Linux Wiki. »
Uye c xd
Zvisinei, ivo vanofanirwa kuita zvimwe zvakatumirwa zvakanangana neArchUsers
Zvizhinji mune yangu kesi mushure mekurasa tsika: /
Ndine mavhidhiyo akati wandei pane yangu YouTube chiteshi uye pane yangu blog futi https://archlinuxlatinoamerica.wordpress.com ????
Iwe wakanganwa yakanakisa yekuvandudza:
Isu tinorangarira Suya muchiSpanish zviri nyore kupfuura Syua uye marongero emaparamende haachinje, mune iyi kesi, mhedzisiro
Nezve iyo noconfirm, kune izvo zvinovandudzwa kubva kuAUR irondedzero inosimbiswa iyo yainokumbira, kunyanya kana iwe uri probón, uye nekudaro unoivaponesa.
Lagarto, ndanga ndichive neinononoka kwazvo Internet muArch kwemwedzi asi kana iri Mageia inoshanda zvakakwana, handina kupinda mumatanda uye kushandisa mukana wekuti ndine bhiriji randinoda kuona kuti ndingaigadzirisa sei.
Pane chimwe chinhu chakadai chakaitika kwauri here?
Ndine urombo kana izvi zvikatyora chero mitemo.
isa iyo cube mufananidzo mune yepamusoro mhando
Mhoro, ruregerero kusaziva kwangu kwakadzama, asi ini ndine mubvunzo wakakosha: Ndanga ndichishandisa Arch kwemazuva matatu, ndine bhutsu mbiri neimwe yekushandisa system. Ini ndinoda iyo distro, asi ini ndinopinda mune dambudziko: handikwanise kuisa yaourt (kutanga kwezvose ini ndatova ne base-devel yakaiswa), ini ndakachinja pacman.conf ndichishandisa nano uye ndikawedzera repo
SigLevel = Hazvina kumboitika
Nekudaro ini ndinowana iko kukanganisa: kukanganisa: haikwanise kutora iyo faira "archlinuxfr.db" kubva repo.archlinux.fr: Kushanda kunonoka. Asingasvike 1 mabheti / sec akaendesa masekondi gumi apfuura
kukanganisa: kutadza kugadzirisa archlinuxfr (kurodha raibhurari kukanganisa)
Kwayedza kusiya iyo SigLevel = Inesarudzo TrustAll, kungoedza kuyedzwa. Iyo internet kumhanya yakaringana, mamwe ma repos haandipe matambudziko, ini ndinogona kutarisa kana kurodha pasi pane iyo spidhi yandakabata.
Mubvunzo wangu ndewokuti iyi repo ichiripo here kana ndikatora yaourt yakananga kubva kuAUR ndobva ndanyora.
Kwazisai uye ndine urombo kana iwo mubvunzo wakanyanyisa, asi ndinodzokorora, ndangove neArch kwemazuva matatu chete.
Mushure mekuwedzera iyo yekuchengetedza uye kuchengetedza, isa yaourt:
$ sudo pacman -S yourt
Nezve mutsa, ndinoda rubatsiro rwako nemubvunzo, muArch, kana mwana wako Antergos inova iyo yandiri kushandisa, zvakafanira here kana kuti zvinogoneka kumutsiridza macustomer edhiraivha eiyo kadhi revhidhiyo sezvazvinoitwa mumastros seUbuntu? Kana zvichibvira, iwe ungandipe ruoko runotsanangura kuti ndozviita sei?
Capitaine vatuki: Iyo paketi yezvishatisi yakafuridzirwa neMacOS uye yakavakirwa paKDE Breeze
Maitiro ekuisa Office Online paUbuntu 16.04